ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): Myanmar Literature Talk 2011
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 5:00 PM
သူတပါး၏နာမည် အလွဲသုံးစားလုပ်၍ တဖတ်သတ်ပုတ်ခဟ်ပြောဆိုတာ လုံးဝကိုလူကြီ: လူကောင်းမဆန်ပါ။ မိမိကိုတိုင်က မြန်မာစာပေ နှင်. ယဉ်ကျေးမှူကို အလေးထားသော သူ ဖြစ်ပါလျင် ယခုကဲ.သ.ို။ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းသည် မိမိ၏သေးသိမ်သောစိတ်ဓတ်ကိုဖော်ပြသလိုဖြစ်နေပါသည်။
မိမိသည် မြန်မာစာပေ နှင်. ယဉ်ကျေးမှူကို အလေးထားသော သူ ဖြစ်ပါလျင်၊ အဘယ်.ကြောင့်မိမိ၏ Thazin Success Magezine ၌ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ.သော မြန်မာ့ရိုးရာ ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုများကိုမသုံးပဲ ၌ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ.သော မြန်မာအမျိုးသမီးမျာ: အရှက်ရစရာ မျက်နှာဖုံးသုံးပါလဲ.
လူကြီ:လူကောင်းဆိုပါက အဘယ်ကြောင့် တဖတ်သားအား ရုတ်ညံ.သော အသုံးအနှုံးများနှင်.ရေးသားပုတ်ခတ်ပါသလဲ?
အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်သည် " အတ္တမြတ်နိုးသူများ"ဟု ရိုင်းပျစွာသုံးထားပြီ: "စာပေမြတ်နိုးသူများ" ဟူသောနာမည်ကို သုံးပါက ဥပဒေ အရ အရေး ယူမည်ဟု ခြိမ်:ခြောက် ထားသည် ကို ကြည်.ခြင်း ဟာ ထိုသူ၏ အ ဆင့်အတန်: ကို သိနိုင်ပါသည်.
ဒါဆိုရင် (ဦး)ကောင်းမြဟ်နွယ်အား အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ် များမှလည်: တရားစွဲဆိုနိုင်ပါသည်။အကြောင်းမှာ ကာယကံရှင် များ မသိ ဘဲ နာမည် ယူ သုံး ပြီ: တဖတ်သတ်စွပ်စွဲပြောဆို ထား သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
တဖတ်မှ သည်းခံ၍ မည်သည်. အပြုအမူဖြင်.မျှ မတုံ.ပြန်သည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စာပေမြတ်နိုးသူများ (Singapore Poly )ကျောင်းသားဟောင်းလူငယ်များအဖွဲ့ကို လေးစားမိပါသည်.ု